Maamulka Degmada Balcad oo ku baaqay in gurmad loo fidiyo dadkii uu ku fatahmay webiga Shabeelle – Radio Muqdisho
Maamulka Degmada Balcad oo ku baaqay in gurmad loo fidiyo dadkii uu ku fatahmay webiga Shabeelle
Maamulka Degmada Balcad ee gobalkan Shabeellaha dhexe ayaa kormeer howleed ku tegay meelaha uu fatahaadda ka geystay webia Shabeelle, si uu ugu kuurgalo saameynta fatahadaha ay ku yeesheen dalagyadii beeraha.
Tuulooyinka Xawaadleey iyo Jameeco oo hoosyimaada Degmada Balcad oo ah goobaha ay saameeyeen fatahaadaha waxaana uu wabiga ku fatahay beero ku yaalay Tuulooyinkaasi oo ku beernaa dalagyo kala duwan iyo guryo ay daganaayeen dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi kuwaasi oo hada aan heeysan meel ay hooy ka dhigtaan.
Dadka tuulooyinkoodi iyo beerahoodi ay saameeyeen biyaha webiga oo ku fatahay ayaa u sheegey mas’uuliyiinti maamulka degmada in dhibaato ay ka soo gaartay fatahaadaha uu sameeyey webiga Shabeele ugana waramay xaaladooda.
Gudoomiyaha tuulada Xawaadley Cabdulle Macaan Adeerow ayaa sheegay in tuulada Jameeco ay ka barakaceen in kabadan labakun oo Qoys, wuxuna baaq u diray Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Hay’adaha gar gaarbixiya.
“Dhibaatada ka dhacday Tulooyinka waxaa koow ka ah Xaafadan Jameeco oo ka barakacay labo kun oo qoys marka, waxa ay u baahan yihiin dadkani gar gaar in la la soo gaaro” ayuu yiri Cabdullaahi.
Guddoomiyaha degmadda Balcad Maxamuud Maxamed Maxamuud Saneey oo arrimahasi ka hadlayay ayaa codsaday in laga caawiyo bulshada dhibaatooyinka fatahaada.
“Waxaan cod saneeynaa in dadka samafal loosameeyo haddii ay tahay dowladda, hadii ay tahay dhinaca hay’adaha deeqaha bixiya iyo cidkasta oo wanaaga wax ku baxsaneeysa”ayuu yiri Guddoomiyaha.
In tabadan fatahaadaha uu sameeyo webiga Shabeelle ayaa saameeya dalagyada beeraha, taasi oo dhibaato ku ah nolosha dadka beeralayda, ayadoo dadkan laga dheehan karay wejiyohooda sida ay uga murugoonayaan dhiaatooyinka biyuhu ay geysteen.
Waddooyinkii ku xirmay roobadkii ka da’ay Beladweyne oo dib u dayactir lagu bilaabay
Wasiirka difaaca ee Soomaaliya oo Cadaado lagu soo dhaweeyay “SAWIRRO”
Wasiirka difaaca ee Soomaaliya oo Cadaado lagu soo dhaweeyay "SAWIRRO"